China Gburugburu Stone mwepụ emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Igwe mwepụ okwute dị gburugburu bụ akụrụngwa iwepụ akụrụngwa na ụlọ ọrụ mmepụta brik na tile. Ọ nwere ike ịgbanye ma kpokọta ihe ndị dị n'etiti rollers abụọ ahụ. Ihe na-echi ọnụ n'ala na-abanye na belt ebufe site n'okpuru, a na-ahapụkwa nkume ndị ahụ site na ọdụ ụgbọ mmiri na-agbapụta nkume iji nweta mmetụta nke iwepụ nkume na apịtị.
The elu nke gburugburu ala uwe nke igwe a na-ntekwasa na-eyi na-eguzogide ihe onwunwe, na elu n'elu ekweghị ekwe, mma na-eyi ndị na-eguzogide, ike nkume mwepụ mmetụta, na ala ike oriri.
Ọ dabara adaba maka akụrụngwa nke na-esighi ike (Platins ekweghị ekwe 4-5), dị ka apịtị ugwu na-ewu ala na-adịghị azọpịa na iwepụ nkume.
Ọrụ Initiative ndinuak na nkume mwepụ
Workingkpụrụ ọrụ Spnkume mwepụ iral
The igwe mejupụtara a Nchikota mgbidi panel, ala nzukọ, hopper na ike nnyefe usoro. Mgbe moto abụọ ahụ malitere, a na-eji eriri abụọ nwere oke ọsọ dị iche iche iji mee ka ndị na-agagharị agagharị na-agagharị na oke ọsọ ọsọ, si otú a na-agagharị ma na-akụpịa ihe ndị na-abanye na ọdịiche dị n'agbata rollers abụọ ahụ na eriri ebu site na ala, na a na-ahapụ nkume ndị ahụ site na ntaneti ahụ iji nweta mmetụta nke iwepụ nkume na apịtị.
a) Tupu e tinye akụrụngwa ahụ, ndị nyocha niile kwesịrị iji nlezianya nyochaa ya ma ghara ịtọpụ ma ọ bụ akụkụ furu efu. Lelee maka ndị na-akwụsị n’etiti akụkụ ndị na-agbagharị
b) Lelee otu ihe tupu ịmalite. Enwere ike itinye moto ahụ n'ime ọrụ maka oge na-enweghị ibu (≥ 30 nkeji). A ga-amalite ịmalitegharị ọ bụla na-enweghị ibu ma tinye ya n'ọrụ mbubata mgbe ị banyere ọsọ ọsọ.
c) N'ihi enweghị otu ihe nke ihe, vibration nke akụrụngwa ga-eme ka ndị na-atọpụ ngwa ngwa, n'ihi ya, ọ ga-enyocha ugboro ugboro.
d) N'oge lubrication nke akụrụngwa, a na-agbanye ntụ na-agagharị na griiz calcium dị mgbagwoju anya (2fg-1) n'otu oge n'oge nzukọ ikpeazụ. N'ozuzu, a ga-anọchi ma ọ bụ gbakwunye griiz na-ete mmanụ n'ime ụbọchị 10 ~ 20 mgbe arụchara ọrụ.
e) Ọ bụrụ na ndị abụọ rollers elu eyi, ọ kwesịrị-adọ ịgbado ọkụ wear-eguzogide ihe.
Nke gara aga: High Speed ​​Ugboro abụọ ala Crusher
Osote: Ahịhịa Crusher